Nisehoana haintrano teny Ambodin’Isotry, afakomaly alina. Voalaza fa nisy trano maromaro may tamin’izany, ary maro tamin’ireo ny hazo. Tsena avokoa ny ankamaroan’ireo, nahitana toeram-pivarotan-toaka. Tonga teny an-toerana ny mpamonjy voina namono izany, izay naharitra adiny iray vao maty ny afo. Voalaza fa noho ny fipoahan’ny herinaratra ihany koa no nahatonga izany. “Mahagaga ihany ity haintrano miseholany ity”, hoy ny mpandinika. Loza tsy nahy sa niniana natao?
Miverina amin’ny laoniny ny filaminana any Morondava, taorian’ny savorovoro noho ny resaka fahafatesana vehivavy iray. Nitaky ny hanaovana fitsaram-bahoaka olona enina voarohirohy efa naiditra am-ponja ny andian’olona avy any Andranomena, 28 km miala an’i Morondava. Manodidina ny 100 eo ireo olona ireo, izay fianakavian’ilay vehivavy maty. Nomena fao-dranomaso 400.000 Ar sy kamiao nitaterana ireo olona ireo hiverina any amin’ny tany niaviany.
Zandary mpiana-draharaha iray notifirin’ny jiolahy, ka voa teo amin’ny tanany, tany Toliara, omaly tamin’ny 4 ora maraina. Araka ny fanazavana, handeha hamonjy famoriana ao amin’ny CIRGN any Toliara izy io no nosakanana dimy lahy ary noteren’ireo hanangan-tanana sy hamoaka ny zavatra rehetra any aminy. Nanohitra ilay zandary ka namoaka basy vita gasy ireo jiolahy ary nitifitra. Voa teo amin’ny tanany havia izy io, ary nitsoaka ireo jiolahy taorian’izay. Nitsoaka tao amin’ny RM5 ilay zandary, ary tao no nalain’ny namany.